Yongeza oopopayi beCSS kwiWebhusayithi yakho yeWordPress ngePlagi yeHero yeCSS | Martech Zone
Yongeza oopopayi beCSS kwiWebhusayithi yakho yeWordPress ngePlagi yeHero yeCSS
NgoMvulo, Juni 27, 2016 Douglas Karr
Iqhawe leCSS sisixhobo esimnandi sokulungiswa kweCSS kwimixholo yeWordPress kangangexesha elithile. Izixhobo ezinje ngezi zenza ulwenziwo olulula kubasebenzisi beWordPress abafuna ukwenza ngokwezifiso uyilo lwabo, kodwa baswele amava okufaka iikhowudi kwiCSS.
Iimpawu zeHero zeCSS zibandakanya
Indawo kunye neCofa ujongano - ukuhambisa imouse kwaye ucofe into ofuna ukuyilungisa kwaye uyihlengahlengise ukuze ilingane iimfuno zakho.
Umxholo weAgnostic - Yongeza amandla eHero kwimixholo yakho, akukho khowudi yongezelelweyo kwimixholo yakho efunekayo kwaye ivumela ulawulo olupheleleyo kweziphi iipropathi \_ izinto ofuna ukuba zihlelwe.
Hlaziya iiNdlela zeNdlela yesiXhobo -Lungisa kwaye uhlengahlengise indlela umxholo wakho obonisa ngayo kwizixhobo eziphathwayo, yongeza izixhobo ezizodwa ngokwezifiso zihlala.
Ukukhetha umbala okrelekrele -Ukongeza ukubamba kwakho kwimixholo yakho ngoku kulula njengokukhomba kunye nokucofa umbala, iHero ikwagcina imibala oyisebenzisileyo.
Sebenzisa iifonti ezingama-600 + - Yongeza eyakho iklasi kunye nobuntu kwimixholo yakho ye-WordPress ngokukhetha kuluhlu olubanzi lweefonti zewebhu kunye neeglyphs
I-CSS enobunzima -Ukwakha iigradients, izithunzi zebhokisi, izithunzi ezibhaliweyo kunye nazo zonke iipropathi zeCSS zangoku yindawo kwaye ucofe umcimbi.
Akukho Vala-ngaphakathi -Ngaba ufuna ukuya kwelinye iqonga? Akukho zinkxalabo, lonke iqhawe elenziwe ngeCSS linokuthunyelwa kwelinye ilizwe ngokuchofoza kube kanye.
Imbali yoHlelo lweCSS -Iqhawe leCSS ligcina ngokuzenzekelayo lonke uhlengahlengiso lwakho kuluhlu oluneenkcukacha zembali, ukubuyela umva kunye nokudlulela kumanyathelo embali kulula njengokucofa iqhosha u-undoqo lokwenza kwakhona.
Umhloli weQela leCSS -Umhloli yi-CSS Hero Plugin evumela ulawulo olongezelelekileyo kwikhowudi yeHero evelisiweyo. Ngomhloli unokucokisa ngokulula, uhlele, ususe isitayile esivelisiweyo seHero okanye wongeze eyakho njengoko uhlala usenza ngesixhobo sakho sokuhlola iwebhu esithandayo njengoMhloli weChannel okanye iFirebug.
Ukukhanya kweenyawo -I-CSS Hero yakhiwa ukusuka kumabala ukuya kuthi ga "ukukhanya kweenyawo" iplagi, ngokusisiseko isebenzisa izixhobo kuphela ngelixa kusungulwa umhleli we-css ophilayo. Ayizukucothisa umphathi wakho weWordPress okanye uyiqhekeze ngeepaneli ezininzi zokhetho. Isebenzisa inkumbulo encinci ngelixa isenza umsebenzi oluncedo ngokwenene.
Isandula ukwenziwa ilayibrari yeAnimate It yeCSS3, enikezela ngeempembelelo ezininzi zoopopayi, kubandakanya ukubhuza, ukubuna, ukufiphala, ukubetha, ukujikeleza, ukushukumisa kunye nokujija. Cofa ividiyo ofuna ukuyifaka kule post.
tags: oopopayicss oopopayicss bouncecss iphelecss iflipiqhaweImixholo yeqhawe le-csscss ukubethacss ujikelezecss vuthululacss ukujijaoopopayi begamaIgama cssumxholo wegama
Ngokuqinisekileyo uMbhalisi weDomain oMbi kakhulu